Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Zilungiselele ukuba ophephuka kunye Italy ngololiwe ngalo mzuzu wena step unyawo ndizizise emhlabeni wayo ezinkulu. Ilizwe yomlando, izakhiwo omangalisayo, inkcubeko kakhulu kwaye eziphambili, abantu bazi kakuhle emihle kuya kuba yinto uya ukhumbule kude lwakho wokugqibela!…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Oololiwe eYurophu into enkulu; siyabathanda komzila zethu, kwaye ndiza khetha phezu naluphi na uhlobo zokuhamba ngalo naliphi na ixesha. Ngaphandle kokuba ukusuka kwindawo A ukuya kwindawo B Niyakhawuleza, ngendlela ekhululekile kwaye zithembeke, there’s so much most of…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu A umgca Uloliwe entsha uye wasungula, ukufihla Azerbaijan, ikarikuni, no Georgia. Umgca luze 820 Km kwaye yokuhlala freights ukongeza oololiwe abasetyenziswa luluntu. Okokuqala, le iya kuba ngabokuqala ukudibanisa eYurophu China xa adlula Russia. The train will operate from…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Kukho inani lezikhululo zikaloliwe umdla kunye esebenzayo in Spain. Uza kufumana i-high speed, umgama medium, zengingqi, zokuhamba ombaxa ihotele-ngololiwe kulo lonke ilizwe. Ukususela Izikhululo ezinkulu mihla abantu ezincinane singqongwe ngokwemvelo, zezi 10 of Spain’s most Fascinating Train…